Bancedwa Bakwazi Ukufunda Nokubhala eMexico
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Kuye kwaprintwa izigidi zencwadi ethi Zibhokoxe Ekuleseni Nasekubhaleni ngeelwimi ezingaphezu kwe-100 ezinceda abantu bakwazi ukufunda
“Ukufunda lilungelo lomntu wonke, kusisixhobo esiphucula ubomi nolwalamano lwabantu.”—I-UNESCO. *
IINGXELO zibonisa ukuba ngabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-700 emhlabeni wonke, abakwiminyaka eyi-15 nangaphezulu abangakwaziyo ukufunda nokubhala. Ngenxa yoko, baphoswa yintabalala yolwazi naziimfundiso zeBhayibhile ‘ezabhalelwa ukuyalela thina,’ ezisinceda sikwazi ukuziphatha size sibe nobuhlobo noThixo. (Roma 15:4) Ukuze alwe nale ngxaki, amaNgqina kaYehova akumazwe amaninzi aye afundisa abantu ukufunda nokubhala mahala xa efunda nabo iBhayibhile. Ngaba aye aphumelela?
Khawucinge nje ngamaNgqina kaYehova aseMexico, apho uninzi lwabantu luthetha iSpanish. Ukususela ngo-1946 amaNgqina alapho aye afundisa abantu abangaphezu kwe-152 000 ukufunda nokubhala, ibe abanye kubo baba ngootitshala. Aye anconywa gqitha amaNgqina ngurhulumente ngenxa yalo msebenzi. Kwenye ileta kwathiwa: “Isebe Lezemfundo libamba ngazibini kwinkxaso eniye nanayo kwiNkqubo Yokufundiswa Kwabantu Abadala.”
Le nkqubo iye yanceda abantu abadala nabasebatsha. Ngokomzekelo, uJosefina wayeneminyaka eyi-101 xa wayeqala ukufunda, ibe waphumelela emva kweminyaka emibini!
Nangona iSpanish silelona lwimi luthethwa kakhulu eMexico, ayisiso sodwa esifundiswayo. Ngo-2013 abantu abathetha iilwimi zomthonyama ezisibhozo baye bafundiswa ukufunda nokubhala ngeelwimi zabo.
Ukukwazi ukufunda nokubhala kusinika ithuba lokufunda izinto ezininzi ezintsha. Eyona ibalulekileyo kuzo zonke kukuba, kunceda abantu bazo zonke iintlobo bakwazi ukufunda iBhayibhile eyincwadi ebhalwe nguThixo esikhulula kwiinkolelo nakwiimfundiso ezibubuxoki zecawa nakwimikhwa eyenzakalisayo.—Yohane 8:32.
^ isiqe. 2 I-United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
WAMANGALISA INTSAPHO YAKHE
UDaniel wafunda iNtetho Yezandla YaseMexico kwii-DVD
UDaniel wayengeva, ibe loo nto yayisenza kube nzima ukuthetha kakuhle nabanye. Ngenxa yoko, wayedla ngokuziva edandathekile eziva ngathi akayonxalenye yosapho. Xa wayeneminyaka eyi-23, uDaniel waqalisa ukufunda iBhayibhile neNgqina elinguJosué elalingeva nalo, ibe ekuqaleni lalimfundisa ngokusebenzisa izimbo zomzimba nangokuzoba. Emva koko, waye wancedwa kukubukela iiDVD ukuze afunde iNtetho Yezandla yaseMexico. *
Njengoko yayizika imfundiso yeBhayibhile entliziyweni yakhe, uDaniel waqalisa ukuba neempawu iBhayibhile ezibiza ngokuba ‘bubuntu obutsha,’ ezifana ‘nemfesane, ububele, ukuthobeka kwengqondo, ubulali, nokuzeka kade umsindo.’ (Kolose 3:10, 12) IBhayibhile yamnceda wanembeko nakubazali bakhe. (Efese 6:1, 2) Intsapho yakhe yayimangalisiwe! Phofu, umama wakhe wavuya kangangokuba wade waneenyembezi zovuyo, ibe wambulela kakhulu uJosué ngokunceda unyana wakhe asondele kuThixo. Ngo-2007, uDaniel wakufanelekela ukubhaptizwa ukuze abe liNgqina likaYehova.
^ isiqe. 12 Iincwadi eziyi-46 zamaNgqina kaYehova ziyafumaneka kwii-DVD ngeNtetho Yezandla yaseMexico. Kwiwebhsayithi yethu u-jw.org, kukho iividiyo zeeNtetho Zezandla zamazwe amalunga ne-80. Ukuze kuncedwe iimfama, iincwadi zethu ziyafumaneka nangeBraille.
Amawaka Abantu Afunda Ukulesa Nokubhala
IBhayibhile Emalunga Neemitha Ezimbini
AmaNgqina KaYehova—Ashumayela Iindaba Ezilungileyo Ngolungelelwano